आइफोन एन्ड्रोइड फोन भन्दा १ सय ६७ गुणा असुरक्षित – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By डिजिटल खबर Last updated Dec 31, 2019 24 0
हालै प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार अन्य ब्राण्डका स्मार्टफोनहरूको तुलनामा आइफोन साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यधिक असुरक्षित भएको पाइएको छ । जुन एप्पलको आइफोनको प्रयोगकर्ताहरूका लागि दुखद् खबर हो । रिपोर्ट अनुसार एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको तुलनामा आइफोन ह्याक हुने जोखिम १ सय ६७ गुणा अत्यधिक रहेको छ ।
बेलायती कम्पनी केस डट ट्वान्टीफोरले गरेको अध्ययनले आम धारणाविपरीत आइफोन निकै असुरक्षित रहेको देखाएको हो । बेलायती प्रयोगकर्ताले गर्ने गुगल सर्चको मासिक सर्च भोल्यूम डाटा संकलनपश्चात् गरिएको विश्लेषणका आधारमा कम्पनीले रिपार्ट तयार गरेको हो ।
प्रयोगकर्ताले स्मार्टफोन ब्राण्ड तथा कुनै एपलाई ह्याक गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा गुगलमा गरेका सर्चको तथ्यांकलाई कम्पनीका शोधकर्ताहरूले अध्ययनको आधार बनाएका थिए । रिपोर्ट अनुसार १० हजार ४० जना प्रयोगकर्ताले आइफोन कसरी ह्याक गर्ने ? भन्ने कुरा गुगलमा खोजी गरेका थिए ।
एलजी, सोनी र नोकिया ह्याक कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने उपाय खोज्नेहरूको संख्याचाहिँ सबैभन्दा कम पाइयो ।
यीमध्ये पनि सोनी कम्पनीका स्मार्टफोन ह्याक गर्ने उपाय खोजी गर्नेको मासिक संख्या ५० भन्दा पनि कम रहेको पाइयो ।
इन्स्टाग्राम सबैभन्दा धेरै ह्याकरहरूको तारो, सर्वाधिक जोखिम
इन्स्टाग्राम सबैभन्दा धेरै ह्याकरहरूको तारो बनेको पाइएको च, अध्ययन अनुसार १३ हजार ३१० प्रयोगकर्ताले कसै न कसैको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट कसरी ह्याक गर्ने भन्ने तरिकाका बारेमा गुगलमा खोजी गरेको पाइयो । धेरै मानिसले ह्याक गर्न चाहने एपको दोस्रो स्थानमा स्नापच्याट रहेको छ भने तेसो स्थानमा ह्वाट्सएप रहेको च ।
जोखिम भएका अन्य एपहरूमा फेसबुक, अमेजन र नेटफ्लिक्स रहेका छन् । फेसबुक ह्याक गर्ने उपायको बारेमा १ हजार १ सय २० जनाले गुगलमा खोजी गरे भने अमेजनका बारेमा १ हजार ७० जनाले खोजी गरेका थिए । शोधकर्ताहरूका अनुसार नेटफ्लिक्सको तुलनामा इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक हुने सम्भावना १६ गुणा धेरै छ ।
भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भको तयारी पूरा, भ्रमण वर्ष उद्घाटन साग भन्दा भब्य हुने !
अब टिकटकमा १६ वर्ष मुनीका बालबालिकासँग डुयट गर्न नपाइने
एनसेल काण्डः एनसेल माथि कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
एनसेल काण्ड: एनसेलको ठगी कहिलेसम्म? के गर्ला सर्वोच्च अदालतले फैसला?